grihasewa@gmail.com – Matribhumi Khabar
Post date १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १८:००
अन्य राष्ट्रिय समाचार समाचार स्थानीय समाचार
Post date १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १७:४९
सुरक्षित बासस्थानले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटेबाघको सङ्ख्या प्रतिवर्ष बढ्दो छ । निकुञ्ज कार्यालयले बासस्थानको संरक्षण, चोरी शिकारी नियन्त्रणलगायतका कार्य निरन्तररूपमा अगाडि बढाउँदै आएपछि पाटे बाघको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
“तस्वीरमा पाटे बाघको सङ्ख्या सन्तोषजनकरूपमा रहेको पाइएको छ”, उनले भने, “आहारा प्रजातिको संरक्षणसँगै पाटे बाघको उपस्थिति उत्साहजनक अवस्थमा रहेको पाएका छौँ ।” आहारा प्रजातिको घनत्व निकै राम्रो भएकाले पाटे बाघको बासस्थानसमेत राम्रो अवस्थमा रहेको उनले बताए । पाटे बाघका आहारा प्रजातिका लागि चरन क्षेत्रमा सुधारसँगै पानीको कमी हुन नदिन निकुञ्जभित्र १४५ बढी कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी निरन्तररूपमा पानीको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । निकुञ्जमा ५५ बढी साना–ठूला गरी प्राकृतिक ताल रहेका छन् ।
“निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चोरी शिकारी गर्नेलगायतका व्यक्ति देखापरे त्यसविरुद्ध सुराकी परिचालन गरी सूचना लिने कार्य गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “पाटे बाघलगायत दुर्लभ प्रजातिका जीवजन्तुको चोरी शिकारी हुन नदिनकै लागि सुराकीले दिएको सूचनाअनुसार कारवाहीसमेत अगाडि बढाइँदै आएका छन् ।”
पाटे बाघ निकुञ्जको कोर एरिया, मध्यवर्ती क्षेत्रका वन र चुरे क्षेत्रमा पाइने गरेका छन् । निकुञ्ज नजिकै भारतीय दुधुवा नेशनल पार्क पर्ने भएकाले बाघले सीमा वारपार गर्ने भएकाले पनि कहिले बाघको सङ्ख्यामा थोरैले घटीबढी हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार संरक्षित वन्यजन्तु (अनुसूची १०) मा पाटेबाघ सूचीकृत छ । सन् १९७४ देखि मात्रै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ संरक्षण कार्य गरिँदै आएको छ । बाघ गणनाको कार्य भने सन् १९९९ देखि हुँदै आएको छ । निकुञ्जको ३०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पाटे बाघको मुख्य बासस्थानका रूपमा रहेको छ । पाटेबाघ विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक र सुन्दर जनावरको श्रेणीमा पर्दछ ।
अर्थतन्त्र राष्ट्रिय समाचार समाचार
Post date १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १७:२७
साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार घटेको छ ।
आज नेप्से परिसूचक १५ दशमलव १३ अंकले घटेर ३,०७९ दशमलव ८२ को विन्दमा कायम भएको छ ।
आज दिनभरिमा २१७ वटा कम्पनकिो २ करोड ६० लाख ४० हजार २३ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ९० करोड ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै गुडविल फाइनान्स कम्पनी ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन डिस्टलरीको २९ करोड ४४ लाख, यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीको २५ करोड ४३ लाख, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको २४ करोड ७५ लाख र रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै रडी हाइड्रोपावर, जीवन विकास लघुवित्तका र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले कमाएका छन् ।
त्यसैगरी आज सबैभन्दा धेरै गुडविल फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
Post date २७ असार २०७८, आईतवार २०:१२
असाढ २७ बिरगंज
बिरगंजमा बिग्त केही दिन देखि कोभिट को कारन निषेधाज्ञा को बेला बिरगंज को बाटो खाली खाली देखिये को थियो कोभिट कमहुन्दै गएपछी बिरगंज को बजार हरुमा धेरै मनिस हरु को चाप बडे को पाइएको थियो बाटो मा मोटरसाइकल पर्किङ गरिदिने र गाउँ बाट मानिस आउदा बिच बाटो बाटै क्र्स गरिने मोटरसाइकल गाडी हरु लाई गारो हुने गरि बाटो क्रस गरिने जेब्रा क्रर्सिङ के हो गाउँ को मानिस हरु लाई थानहुने गरेको देखिएको थियो
तैसैले मध्य नजर गर्दै ट्राफिक प्रहरी ले पछीलो दुई दिन देखि प्रहरी हरु को अभियान ले बिरगंज को द हन्ड्रेड ग्रुपले जनचेत्ना को लागि आज देखि बिरगंज को घन्टा घर को मुख्य सड्क हरु मा खट्दै गरेको हड्रेट ग्रुपको अध्यक्ष बिनय गिरीले जनकारी गराउनु भएको थियो
बिग्त एक महिना देखि नै हन्ड्रेड ग्रुपद्वाले बाढी पिडित हरुलाइ राहत बितरण कार्यक्रम पनि गर्दै आएको आशिष गुप्ता ले बताए
ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रममा विशेष साह .निरज दास.बिशाल पटेल. बिकाश गुप्ता . अनकेश पाण्डे .लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
Tags BIRGUNJ News
अफिसभित्रै हाकिमको दारु पार्टी र डिजे डान्स
Post date २७ असार २०७८, आईतवार १०:४४
प्रदेश नम्बर २ को एक नापी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले अफिसभित्रै दारु पार्टी र डिजे डान्स गरेको तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सिरहाजिल्ला लहानस्थित रहेको नापी कार्यालय लहानका कार्यालय प्रमुख सँजय सिँह सहित अन्य कर्मचारीहरुले कार्यालयभित्रै दारु पार्टी गरेको तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ ।
अषाढ मसान्तको अन्तिम भन्दै पार्टी (भोजभतेर) गरेको भनेर केही जनाले फेसबुकमा दारु खाँदै गरेको फोटोहरु सार्वजनिक गरेको छ । नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सँजय सिँहले शनिबार (आज) कार्यालयभित्रै मदिरा पार्टी गरेको हो ।
सरकारी कार्यालयभित्र यस्ता क्रियाकलाप गरे कारवाही हुने भएपनि कार्यालयको प्रमुख नै आफ्नो कार्यालयमै दारु पार्टी गरेको फोटोहरु सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
जानकारी अनुसार, कार्यालय प्रमुख सिँहको विदाई कार्यक्रम समेत रहेको भन्दै कार्यालयभित्रै दारु पार्टी गरेको हो । तस्विरमा देखिए अनुसार, कार्यालयभित्रै दुई टेबललाई जोडेर ग्रीन सिग्नेचर (रक्सीको ब्राण्ड) को बोतल सहित ग्लासमा समेत मदिरा देखिएको छ ।
Post date २६ असार २०७८, शनिबार २१:२६
काठमाडौ । नेपालमापनि टिकटक बन्द हुने भएको छ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ ।
नेपालमापनि उमेर समूहलाई एकदमै भेरिफाई गर्न नेपाल हेर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई टिकटकले भनिसकेको छ । धेरै विकृति आएको भनेर गुनोसो आएपछि साउन १ गतेबाट नेपालमा टिकटक एकाउन्ट बन्द गर्ने प्रस्ताव समेत आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार प्रदेश २
Post date २५ असार २०७८, शुक्रबार २१:४४
Post date २५ असार २०७८, शुक्रबार १५:४२
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा बढाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले शुक्रबार सो कुराको घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री मोरिसनले अष्ट्रेलियाकामा आगामी सेप्टेम्बर महिनामा कोरोना भाइरसको खोप फाइजर खोप आउन लागेको र त्यो खोप अगष्ट महिनाबाट दिइने बताए ।
उनले आगामी सेप्टेम्बर महिनामा ४५ लाख मात्रा खोप आउने लागेको र त्यसलाई अगष्ट महिनादेखि नागरिकलाई वितरण गरिने भएको पनि बताएको समाचारमा जनाइएको छ । उनले यही जुलाई महिनाको १९ तारिखदेखि अष्ट्रेलियामा हरेक हप्ता नै कम्तीमा पनि दश लाख खोप ल्याइने पनि बताए ।
सो खोप नागरिकहरुलाई सकेसम्म चाँडै वितरणको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोरिसनले अष्ट्रेलिया ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सो कुरा बताएका छन् । उनले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा अष्ट्रेलियाका प्रत्येक नागरिकलाई कम्तीमा पनि एक मात्रा खोप दिइसक्ने तयारी गरेको बताए ।
जुन महिनामा अष्ट्रेलियाया सरकारले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नका लागि आवश्यक धेरै तयारी गरेको जानकारी पनि गराएका छन् ।उनले दिएको शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार अष्ट्रेलियाका १६ वर्षमाथिका कम्तीमा पनि १० प्रतिशत नागरिकले खोप लिइसकेका छन् । अष्ट्रेलियाको सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
Post date २५ असार २०७८, शुक्रबार १३:३२
२५ असार, बिरगंज
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण केही कम हुन थालेपछि भारतका विभिन्न राज्यले विद्यालय खुलाउने तयारी गरेका छन् । उत्तराखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, बिहारलगायत केही राज्यले आउँदो हप्तादेखि विद्यालय खुलाउने तयारी गरेका हुन् । दिल्लीमा भने सङ्क्रमणको जोखिम नै रहेकाले तत्काल विद्यालय नखुल्ने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तराखण्डमा आउँदो सोमवारदेखि कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यालय खुल्ने छ । तर, विद्यार्थी तत्काल विद्यालय जाने छैनन् । विद्यालयमा शिक्षक मात्र जाने छन् ।
विद्यार्थी घरमै अनलाइनमार्फत पढ्नेछन् । यस्तै, बिहारमा कक्षा १० देखिमाथिका कक्षाको पढाइ सोमवारदेखि नै सुरु हुनेछ । यसका लागि ५०, ५० प्रतिशतमा विद्यार्थीलाई आलोपालो गरी विद्यालयमा बोलाइने छ ।
महाराष्ट्रमा आउँदो ३१ गतेदेखि कक्षा ८ देखि १२ कक्षासम्मको पढाइ हुनेछ । त्यसैगरी आन्ध्र प्रदेशमा अर्को महिना विद्यालय खुलाउने तयारी छ । राजस्थानमा भने विद्यालयमा नयाँ भर्नाका लागि अनुमति दिइएको छ ।
तत्काललाई भने विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिलाई अनुमति दिइएको छैन । त्यसैगरी उत्तर प्रदेशका विद्यालयमा साउन ४ गतेदेखि ९ देखि १२ कक्षासम्मको पढाइ हुनेछ ।
डडेल्धुरा प्रशासनले महिलाको नागरिकतामा पुरुषको तस्बिर टाँसिदिएपछि…
Post date २३ असार २०७८, बुधबार २०:५५
डडेल्धुरा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले एक महिलाको नागरिकता प्रतिलिपीमा पुरुषको तस्बिर टाँसेको पाइएको छ।
प्रशासनले जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका–१ भनेर ठेगाना उल्लेख गरिएको देवकी धामीको नागरिकतामा एक पुरुषको फोटो राखेर त्रुटि गरेको हो।
धामीको नागरिकतामा अजयमेरु गाउँपालिका–१ समैजीका राजबहादुर भण्डारीको तस्बिर टाँसीएको हो। उक्त नागरिकताको प्रतिलिपिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन्।